NINKII INDHAHA LA'AA IYO INANTII W/Q Suldaan Garyare.
Shirkii Dhuusamareeb oo lagu xaqiijiyay in doorasho qof iyo cod ah aysan dhici karin.
Sunday February 09, 2020 - 09:51:46 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Beri ayaa nin indha li'i damcay in uu la haasaawo inan Soomaaliyeed. Ninka indhaha li'i ma ahayn mid qirsan indha la'aanta, waana uu inkirsanaa.
waa aqal soomaali ka tarjumaya dhaqanka miyiga
Maalin maalmaha ka mid ah ayuu inantii ku yiri anigu ma ahi mid indho la’e geedkaas salkiisa irbadda ku jirta ayaan soo saarayaa. Inta uusan inanta u iman ayuu geedka salkiisa (jirddiisa) irbad ka taagay.
Inantii oo rummaysan la’a warka ninka ayaa tiri orodoo soo saar irbadda aad sheegayso. Ninkii waxa uu u dhaqaaqay xaggii geedka, isaga oo aan weli geedkii gaarin ayaa awr soo ka la dhexgalay ninkii iyo geedkii, dabadeed maxaa dhacay? Ninkii waxa uu foodda ku qaaday awrkii, inantii oo markaa daawanaysa waxa dhacaya ayaa ninkii ku tiri, indhaha aad ku aragtay irbadda geedka salkiisa ka taagan maad awrka kaga leexatid oo aad ku aragtid? Sheeko kale ayaa jirta oo ah in Maraykanku uu muddaba ku doodi jirey in dayax gacmeedka Maraykanku uu arki karo ama soo saari karo waxa ku qoran wargays dhulka yaalla, balse arrintaa fashil badan ayaa ka soo baxay markii uu sheegi waayey hawlo badan oo Maraykanku uu rabay in uu guul ka gaaro.
Labadan sheeko waxa ay ii la mid yihiin Hay’adda sirdoonka (jaajuusiinta) ee NISA, ayaa beryahanba dadka ugu qudbaynaysay in ay heshay xog ah in hoggaanka sare ee Xarakada Al-Shabaab ay wax ka beddeshay qaybo ka mid ah hoggaanka Xarakada.
balse waxa is weyddiin leh NISA waxa ay ogaan weyday qaraxyada loo geysanayo kuwii ay ilaalinaysay ama goobihii iyada looga arriminayey, sidee ayeyse ku ogaan kartaa nidaaam aysan ogayn qaabka uu u dhisan yihiin, aqoon sirdoonnimo oo ay ku ogaan kartaana aysan NISA lahayn amase ka muuqan? Waayo hawlo ka horreeya ayey qaban weyday oo ku fashilantay. Warkaasi waxa uu la mid yahay sheekadii inanta iyo ninkii indhaha la’aa amase beentii uu Maraykanku muddoba dunida ugu sheekayn jirey ee ceebta ku soo gabagaboobay.
Mareykanka oo duqeyn ku dilay Suldaankii Beesha Jareerweyne ee Jubbooyinka.